घोषणापत्र - विश्व मार्च
घर » Manifest
विश्व मार्च को प्रकट
दस वर्षपछि शान्ति र असहमतिको लागि पहिलो विश्व मार्च, कारणहरू जसले उनलाई उत्प्रेरित गर्‍यो, कम हुनुबाट टाढासम्म, अझ सुदृढ बनाइएको छ। हामी त्यस्तो संसारमा बस्छौं जहाँ अधिनायकवादी एकतरफावाद बढ्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व सुल्झाउनेमा संयुक्त राष्ट्र संघको मूल भूमिका बल गुमेको छ। दर्जनौं युद्धहरूमा रक्तक्षेपण हुने संसार, प्राय: गलत सूचनाले मौन पारिदियो। पर्यावरणीय सes्कट छ कि रोम क्लब आधा शताब्दी पहिले लाखौं आप्रवासी, शरणार्थी र वातावरणीय विस्थापित मानिसहरूसँग जो अन्याय र मृत्युले भरिएका सीमानाहरूलाई चुनौती दिन बाध्य छन्। जहाँ यो बढ्दो दुर्लभ संसाधनहरूको विवादको लागि युद्धहरू र नरसंहारहरूलाई जायज ठहराउनको उद्देश्य हो। जहाँ प्रमुख र उदीयमान शक्तिहरू बीच "भू-राजनीतिक प्लेट्स" को संघर्षले नयाँ र खतरनाक तनाव खडा गर्छ। एक संसार जहाँ धनी bankणको लोभ, विकसित देशहरूमा पनि कल्याणकारी समाजको कुनै आशा। क्रोधको छालहरू जुन शरणार्थी र आप्रवासीहरू विरुद्ध अस्वीकृति र क्सीनोफोबियाको खतरनाक आन्दोलनको हेरफेर र उत्पन्न अन्तमा उत्पन्न हुन्छन्। संक्षेपमा भन्ने हो भने, यस्तो सुरक्षा, हिंसाको औचित्य, "सुरक्षा" को नाममा, अनियन्त्रित अनुपातको सैन्य वृद्धिको जोखिम बढाउँछ।
El परमाणु हतियारको गैर-प्रसारमा सम्झौता, 1970 बाट , आणविक निरस्त्रीकरणको लागि बाटो खोल्नबाट धेरै टाढा, यो कन्सोलिडेट छ
सामूहिक विनाशको शक्ति, अमेरिका, रसिया, चीन, युनाइटेड किंगडम, फ्रान्स, इजरायल, भारत, पाकिस्तान र कोरिया गणराज्यको हातमा परमाणु शस्त्रेको साथ प्रारम्भिक वैश्विक मृत्यु क्लबको विस्तार। यी सबै वर्णन गर्दछ किन आणविक वैज्ञानिक समिति वर्तमान वर्तमान सूचकांक राख्छ (Doomsday घडी) जस्तै सबै भन्दा ठूलो वैश्विक खतरा क्युबाको मिसाइलहरूको संकट एन 1962।
आज, द शान्ति र असहमतिको लागि 2ª विश्व मार्च, पहिले भन्दा बढी आवश्यक छ।2को 2019 को अक्टूबर 8 मा सबै महाद्वीपहरूको औंठी बसाउन म्याड्रिड छोड्ने योजना छ, 2020 को मार्च XNUMX सम्म जुन म्याड्रिडमा समाप्त हुन्छ। यसले अहिंसाको शिक्षालाई बढावा दिन्छ र आन्दोलनलाई संघीय बनाउछ जुन विश्वभर मा रक्षा र प्रवर्धन गर्दछ
प्रजातन्त्र, सामाजिक र वातावरणीय न्याय, लैंगिक समानता, मानिसहरूबीच एकता र यस ग्रहमा जीवनको स्थिरता। मार्च जुन निम्न उद्देश्यहरूतर्फ विश्वव्यापी रूपान्तरणको प्रयासमा यी आन्दोलनहरू, समुदायहरू र संगठनहरूलाई दृश्यात्मक र सशक्त बनाउने प्रयास गर्दछ:
त्यो ठूलो ग्लोबल क्लमर उठाउनुहोस् "हामी, " डे ला संयुक्त राष्ट्र को चार्टर, समर्थन गर्न परमाणु हतियारको निन्दामा संधि, जसले ग्रहणको विनाशको सम्भावनालाई मेटाउँछ र मानवताको आधारभूत आवश्यकताहरु समाधान गर्न संसाधनहरूलाई मुक्त गर्दछ।
फिर्ता Las संयुक्त राष्ट्र , सिविल सोसायटीमा सहभागी गर्ने, सुरक्षा परिषदको लोकतान्त्रिक बनाउने यो प्रामाणिकतामा परिणत गर्न विश्व शान्ति परिषद । र एक सिर्जना पर्यावरण र आर्थिक सुरक्षाको परिषद, कि पाँच प्राथमिकताहरू सुदृढ पार्नुहोस्: भोजन, पानी, स्वास्थ्य, वातावरण र शिक्षा।
एक मान भोकर उन्मूलन योजनाSDGs (सतत विकास लक्ष्य) अनुसार, त्यससँग आवश्यक रकमको लागि प्रभावकारी हुने छ।
सक्रिय गर्नुहोस् सबै प्रकारका सर्वोच्चतावाद, नस्लवाद, विभाजन, भेदभाव र यौन, उमेर, जाति, राष्ट्रीयता वा धर्म द्वारा सतावटको विरुद्ध तत्काल उपाय योजना .
एक पदोन्नति गर्नुहोस् ग्लोबल नागरिकताको डेमोक्रेटिक चार्ट, त्यो पूरै मानव अधिकारको घोषणा (नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक आर्थिक)।
निस्क्रिय पृथ्वी चार्टर एसडीजी को "अन्तरराष्ट्रीय एजेन्डा" को लागि, जलवायु परिवर्तन संग पर्यावरण को प्रभावकारी र पर्यावरण असक्षमता को अन्य रूपहरु संग प्रभावी ढंग देखि निपटने को लागि।
प्रचार गर्नुहोस् कुनै सक्रिय हिंसा छैन यसैले यो संसारको साँचो रूपान्तरणीय शक्ति बन्न सक्छ, शान्ति, हिंसा, संस्कृति र संस्कृतिको विकासबाट प्रत्येक स्थान, देश र क्षेत्रको संस्कृतिलाई उत्प्रेरित गर्छ। शान्ति र असहमतिको लागि विश्व मार्च.
PDF मा Manifesto डाउनलोड गर्नुहोस्
हिंसा बिना विश्वको लागि पत्र
घोषणापत्र (फ्रान्सेली) डाउनलोड गर्नुहोस्